Eeg Teknoolojiyadda Sheen oo ka Qaybgashay Bandhigga Dubai
Iyada oo leh kamaradaha xannibaadda zoom, culeysyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kamaradaha PTZ bi spectrum, kamaradaha fog ee PTZ, domes iyo alaabooyin kale, View Sheen Technology ayaa ka qeybgashay bandhigga lagu qabtay Dubai. View Sheen wuxuu leeyahay khad badeecad aad u dhameystiran oo ah kamaradaha xannibaadda zoom, kaas oo daboolaya shabakadda iyo kamaradaha lvds digital ...
Eeg Teknoolojiyadda Sheen waxay ka qaybgashay CPSE 2019 Shenzhen
Eeg Teknoolojiyadda Sheen waxay ka qaybgashay CPSE 2019 Shenzhen. View Sheen Technology ayaa siidaysay taxane kaamerooyin xannibaad ah oo aad u dheer sida 860mm /920mm /1200mm camera zoom, taas oo soo jiidatay booqdayaal badan. Kaamiradu waxay soo jiidatay macaamiil badan la -talinta iyo isgaarsiinta. Daawo Sheen Tech ...
View Sheen Technology wuxuu ka qeyb galay CPSE 2018 ee Beijing
View Sheen Technology wuxuu ka qeyb galay CPSE 2018 ee Beijing. Farsamada View Sheen ayaa soo bandhigtay tiro alaabo cusub ah, oo ay ku jiraan 3.5x 4K ultra HD zoom block zoom block, 90x 2MP kamarad block zoom ah oo aad u dheer, iyo UAV dual sensor gimbal camera. Kaamirada xannibaadda ee 90x waa wax soo saar cusub. Waxaan ...
View Sheen Technology waxaa lagu casuumay inay ka soo qeyb gasho seminaarka UAV oo lagu qabtay Tianjin
View Sheen Technology waxaa lagu casuumay inay ka soo qeyb gasho seminaarka UAV oo lagu qabtay Tianjin. View Sheen Technology waxay soo saartay kamarado zoom oo taxane ah oo loogu talagalay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Kaamiradu waxay leedahay HDMI iyo isku xirka shabakadda waxayna la jaan qaadi kartaa noocyo kala duwan oo ah gudbinta fiidiyaha. Kaamirada zoomka ee drone -ka ayaa taageeri karta sna ...